Ọganihu nke ọnụọgụ obodo hụrụ nnukwu oghere dị n'etiti Fresh Farm na-erute onye na-eri ya n'oge na mma.
Mgbanwe nke usoro iri nri nke ndị bi n’obodo ndị mepere emepe ka hazie nri na ihe ọ beụveraụ na-aba n’anya, ahụla nnukwu mmụba na ụlọ ọrụ na-edozi ihe oriri, iji jigide ụkpụrụ dị elu nke ntụkwasị obi na Ogo.
Ike na mmiri bụ ikike dị mkpa maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe oriri na ihe ọ putsụverageụ na-aga n'ihu nrụgide ịchọpụta na ichepụta teknụzụ dị elu nke ga - ọ bụghị naanị ịchekwa ike na mmiri kamakwa ọ ga - edebe Ahịa ka ọ bụrụ ọkwa a na - anabata.
E nwere agbụrụ zuru ụwa ọnụ n'etiti ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ihe oriri na ihe ọ beụverageụ na ihe ọ beụverageụ ma na-ahụ maka ịchọta azịza na-adigide na ọrụ ha. N'ihi nke a, mbọ a na-agba iji hụ na ịdị mma, arụmọrụ, na ntụkwasị obi ga - arụrịrịrịrị ọfụma.
SPL na-enye Ngwaahịa likechekwa Ngwaahịa dị ka Evaporative Condenser, Hybrid oyi na modular jụrụ ụlọ elu dị ka isi mmiri maka nri na ihe ọ industryụ beụ ụlọ ọrụ - sitere na site na-etozu oke ngwọta ụzọ niile na onye mmejuputa. N'ebe obula ikpo oku ma obu ikpo oku di, i gha achota ihe omuma sitere n'aka anyi - nke gha echebara obughi nani ihe gi uto, kamakwa nke ndi ahia gi. Anyị bụ ndị ntụkwasị obi gị ga - enyere gị aka ịkọwapụta usoro usoro a bara uru.